To: आउँदो बजेटको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहलाई
प्रचारमा मात्र साढे १२ अर्ब खर्च
काठमाडौं, वैशाख ३१ - बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले तरलता अभाव झेलिरहेका बेला दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ। निर्वाचनमा दल तथा उम्मेद्वारले गरेको खर्च तथा सरकारको ठूलो बजेट प्रवाहका कारण अर्थतन्त्र एकै पटक चलायमान देखिएको हो। यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिइएका हौ।
दुई दिन हिँडेर मतदान केन्द्रमा
धादिङ, वैशाख ३१ - जिल्लाका दुर्गम गाउँका मतदाता मतदानको अघिल्लै दिन शनिबारै मतदान केन्द्र आइपुगेका छन्। रुबीभ्याली गाउँपालिका–५ नेवेरका मतदाता दुई दिन हिँडेर शनिबार दिउँसो सदाचेतस्थित लापा मावि मतदान केन्द्र आइपुगेका हुन्। मतदान केन्द्र गाउँबाट टाढा भएकाले मतदानको अघिल्लै दिन केन्द्र आसपास आएर बास बस्नुपरेको ती मतदाताले बताए। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि आइतबार बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु हुँदैछ। यो खबर शंकर श्रेष्ठले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।
अजय शर्मा, काठमाडौं, वैशाख ३१ - संसारभर करिब एक सय मुलुकमा शृङ्खलाबद्ध साइबर हमला भइरहँदा नेपाल पनि अछूतो रहेन। शनिबार विश्वभर साइबर हमला भइरहँदा नेपालको विदेशस्थित केही कूटनीतिक नियोगमा साइबर आक्रमण भएको आशङ गरिएको छ। यो खबर अजय शर्माले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको मृगौला दुई जनालाई
काठमाडौं, वैशाख ३१ - मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले मुलुकमै पहिलो पटक मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ) भएका एक व्यक्तिको मृगौला दुई जनामा प्रत्यारोपण गरेको छ। यो खबर अतुल मिश्रले आजको कान्तिपुरमा प्रकाशन गरेका छन्।
खसीको माग बढ्यो, कुखुराको घट्यो
काठमाडौं, वैशाख ३० - चौपाया खरिद–बिक्री संघका संरक्षक दीपक थापाका अनुसार अहिले राजधानीमा खसीको मूल्य दसैँको हाराहारीमा छ । उनले भने, ‘मूल्य दसैँको हाराहारीमा पुगेको छ, तर माग पनि बढेको छ ।’ थापाका अनुसार दसैँमा जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो पाँच सय रुपैय...
बैंकबाट १० लाख भन्दा बढी नगद निकाल्न नपाइने
काठमाडौं, वैशाख ३० - अब बैंकमा चेक साटेर नगद निकाल्नुपर्‍यो भने १० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी नपाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले २० लाख भन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा नगर्न बैंक ताथ वित्तिय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ। यो खबर विनय बञ्जाराले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
काठमाडौं, वैशाख ३० - प्रहरीले काठमाडौंमा १ सय ४२ मतदान केन्द्रलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ। संवेदनशील केन्द्रमा सामान्यभन्दा थप सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। काठमाडौं जिल्लामा ३ सय २० मतदान केन्द्र छन् जसमध्ये १ सय ७८ लाई सामान्यमा राखिएको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
विवादको भूमरीमा राजपा, दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिन आयोगमा
काठमाडौं, वैशाख ३० - पार्टी गठन हुनेबित्तिकै नाममा विवाद सुरु भएको थियो। पछि पार्टीको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्‍यो। त्यस्तै चुनाव चिह्नमा पनि विवाद देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा पहिले नै कसैले छाता चिह्नका लागि दाबी गरिसकेको छ। त्यस्तै पार्टीको विधान कस्तो बनाउने भन्नेमा पनि विवाद देखिएको छ। Comments
मतदानका बेला के-के गर्न पाईंदैन?
काठमाडौं, वैशाख ३० - मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई तत्कालै १५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्। त्यसतिमात्र होइन, सार्वजनिक गरिएको मतपत्र मतपेटिकामा नखसाली छुट्टै राखिने छ, त्यो गणनामा समावेश गरिने छैन। अर्थात तपाईंको मत खेर जानेछ। यो खबर राजेश मिश्रले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
चुनाव जिते पनि काम गर्न रोक!
काठमाडौं, वैशाख ३० - स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ लिने कानुन अझै बन्न सकेको छैन। कानुन नबन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तत्काल काम गर्न पाउने छैनन्। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौ।
एलईडी खरिद प्रकरण : भारतभन्दा अाधै सस्ताे
काठमाडौं, वैशाख ३० - विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट मगाएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्न खोजेको एलईडी चिमको मूल्य विवादित बनाउने प्रयास भइरहँदा नौ वाटको फिलिप्स एलईडी चिमको मूल्य भारतको राजधानी दिल्लीमै प्रतिगोटा एक सय ९० भारु (तीन सय चार रुपैयाँ) पर्ने त्यहाँका बिक्रेताले बताएका...
नेपालबाटै बाहुबलीले कमायो १८ करोड
काठमाडौं, वैशाख ३० - दश दिनमै विश्वभरबाट एक हजार करोड भारूको कीर्तिमानी कमाइ गरेको फिल्म बाहुबली-२ ले नेपालमा पनि दुई सातामै १८ करोड रूपैयाँ जुटाएको छ। यो खबर सुशील पौडेलले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
किन चल्दैनन् चुनावमा गाडी?
काठमाडौं, वैशाख ३० - यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानका दिन आइतबार सवारीसाधन सञ्चालन निषेध गरिएको छ। यो खबर लोकेन्द्र प्रसाईले आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन्।
सरकारद्वारा निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन
काठमाडौं, वैशाख ३० - सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सुरू हुन ३६ घण्टा बाँकी रहेका बेला राज्यको ढुकुटीबाट १५ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरेको छ। यो खबर अर्जुन सुवेदीले आजको नागिक दैनिकमा लेखेका छन्।
काठमाडौं, वैशाख २९ - स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष सपथग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।विधेयकअनुसार गाउँपालिकाका तथा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सभाका सदस्यले अध्यक्ष र प्रमुखसँग सपथग्रहण गर्नेछन्। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
उम्मेद्वारलाई निजी अंगरक्षक
चितवन, वैशाख २९ - जिल्ला सुरक्षा समितिले यहाँका विभिन्न तहका उम्मेदवारलाई निजी सुरक्षाकमी (पीएसओ) उपलब्ध गराएको छ। निर्वाचनविरोधी समूहबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती मूल्यांकनपछि उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइएको हो।
काठमाडौं, वैशाख २९ - साँझ पर्ने वित्तिकै होटेल रेस्टुरेन्टमा चहलपहल सुरु भइहाल्छ। दिनभरि घरघरमा भोट माग्दै हिँड्ने कार्यकर्ता साँझ परेपछि होटेल/भट्टी छिर्छन्। खाना र खाजासँगै मासुका परिकारको स्न्याक्स मगाउँछन्, अनि दारुको चुस्की लिन्छन्। होटेल सञ्चालकलाई पनि ग्राहकको सेवा गर्न भ्याइनभ्याइ देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले सामान्य अवस्थामा चलिरहेको होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गुल्जार बनाइदिएको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा उत्तम काप्री र नवीन अर्यालले लेखेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीका बिदा र काज रद्द , औषधि उपकरणसहित ‘हाई अलर्ट’
काठमाडौं, वैशाख २९ - पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागले देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको बिदा तथा काज रद्द गरेको छ। विभागले ७५ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्...
काठमाडौं, वैशाख २९ - राष्ट्रसंघीय एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यसविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनसक्ने चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिएका छन्। यो खबर सन्तोष घिमिरेले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
मौन अवधिमा के गर्छन् दलहरू?
काठमाडौं, वैशाख २९ - स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि बिहीबार राति १२ बजेदेखि ४८ घन्टे मौन अवधि सुरु भएको छ । मौन अवधिमा दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले मौन अवधिमा प्रचारप्रसारसहित ६ किसिमका रोक लगाएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
उपत्यकाबाट आठ दिनमा २८ हजार बाहिरिए, लाख बाहिरिने अनुमान
काठमाडौं, वैशाख २९ - स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्दै छ । २१ वैशाखदेखि नै उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्दै गएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । आठ दिनमा उपत्यकाबाट करिब २८ हजार बाहिरिएको महाशाखाका डिआइजी मिङमार लामाल...